အမျိုးသမီးများအတွက် Vintage Retro Steampunk Metal နေကာမျက်မှန် ၀ ယ်ပါ၊ ပို့ဆောင်ခအခမဲ့၊ အခွန်မပါ | WoopShop®
အမျိုးသမီးများအတွက်ခေတ်ဟောင်း Retro Steampunk သတ္တုမျက်မှန်
မျက်ကပ်မှန်အရောင် C1 C3 c2 C5 C4 C7 C6 C9 C8 C10
အမျိုးသမီးများအတွက်ခေတ်ဟောင်း Retro Steampunk သတ္တုမျက်မှန် - C1 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
frame ကိုပစ္စည်း: အလွိုင်း
မှန်ဘီလူး Optical Attribute: Mirror, UV400
မျက်မှန်သည်ဖော်ပြချက်တွင်ရှိသည့်အတိုင်းအားလုံး၊ ဒါပေမယ့်စျေးသက်သာစွာငါ ၀ ယ်ချင်ပါတယ်
အရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်သည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ငါ့မျှော်မှန်းချက်ကိုကျော်လွန်ခဲ့တယ်။ ကောင်းစွာထုပ်ပိုးထားသည်။ ထုတ်ကုန်ကိုထိခိုက်မှုမရှိဘဲ။
အရောင်ကပုံထဲကအတိုင်းအတိအကျမတူပါ။ စိတ်မညစ်ပါနှင့်၊ ထို့ကြောင့်အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်
မျက်မှန်တွေကအရမ်းလန်းတယ်! ပထမအကြိမ်မှာဒုတိယအကြိမ်အမိန့်ရှုံးသည်။ အလွန်စတိုင်ကျသည်
မျက်မှန်တွေကအရမ်းကောင်းတယ် !! သူတို့၏ငွေကိုရှာရန်)5+အတွက်အရည်အသွေး၊ အမြန်ပို့ဆောင်သည်။